को हुन् एनसेलको २८ अर्ब सेयर किन्ने भावना सिंह श्रेष्ठ ?::RATONEWS
को हुन् एनसेलको २८ अर्ब सेयर किन्ने भावना सिंह श्रेष्ठ ?
पालको दुरसंचार प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर विक्रीका लागि सहमति भएको छ। सोमबार मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको ८० दशमलव ४ प्रतिशत सेयर किन्न सहमति जनाएको छ। बाँकी रहेको १९ दशमलव ६ प्रतिशत सेयर भने नेपालकै भावना सिंह श्रेष्ठले किनेकी छिन्। एनसेलको १९ दशमलव ६ प्रतिशत सेयर करिव झन्डै २८ अर्ब बराबरको हुन आउँछ।
को हुन भावना ?
भावना वरिष्ठ ग्यास्ट्रोलोजी डाक्टर इश्वरलाल आर्चायकी बुहारी हुन्। आर्चायका छोरा सतिशलाल आर्चायकी उनी श्रीमती हुन् । भावनाको जेठाजु सचिनलाल आर्चाय टेलिकम क्षेत्रमा नै काम गर्छन् । सचिन स्मार्ट सेलका अध्यक्ष हुन् । स्मार्ट सेल ललितपुरकाे कुमारीपाटीमा छ ।
उनीहरुको सिंगापुरमा लाल ब्रर्दश एण्ड सन्स नामक कम्पनी पनि छ। यो कम्पनीले टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। एनसेल किन्ने एक्जियटा कम्पनीसँग पनि उनीहरुको थोरै मात्रामा सम्लग्नता रहेको छ । एक्जिएटामा उनीहरुको थोरै मात्रामा सेयर रहेको पनि अनुमान गरिएको छ।
एक्जियटाले भावनालाई चयन गरेको हो । एउटै व्यक्तिका नाममा २ वटा टेलिकम प्रदायक संस्था खोल्न नेपालमा अनुमति नभएकाले आर्चाय परिवारले भावनालाई अघि सारेका हुन् । आर्चाय ग्रुपले अब स्मार्ट सेलमा रहेको लगानी भियतनामी कम्पनी भाया टेललाई विक्री गर्ने तयारी गरेका छन् ।
भावनाले लिएको सेयर किन्न यसअघि सिद्धार्थ राणाले इच्छुक देखाएका थिए। भावना गृहिणी हुन्। एनसेलले भने श्रेष्ठको सिंगापुरमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्जर नामक संस्था रहेको दाबी गरेको छ। setopaTIBAT